11 ka mid ah madaxda Shabaab oo lacag la duldhigay – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
11 ka mid ah madaxda Shabaab oo lacag la duldhigay
A warsame 9 April 2015 9 April 2015
Golaha Wasiirrada Soomaaliya oo maanta isugu yimid kulan-koodii caadiga ahaa oo uu shir gudoominayey Ra’iisul Wasaare Cumar C/rashiid Cali Sharmaarke ayaa diiradda lagu saaray Amniga guud ee dalka, xaaladaha dadka Soomaaliyeed ee ku nool dalalka Yaman iyo Kenya,waxana ay Xukuumaddu madaxooda dul-dhigtay lacago hoggaanka ugu sareeyo Al-Shabaab.
Ugu horeyn Golaha Wasiirada ayaa ka dooday liis ay ku qoran yihiin 11 Sarkaal oo ka tirsan Al-Shabaab, waxaana golaha wasiiradu ansixiyeen lacago lagu abaal marinayo cidii keenta macluumaad ku aadan halka ay ku sugan yihiin hogaamiyeyaasha sar sare ee ururka Al-shabaab.
Ragga ay dowladda Soomaaliya lacagta ku raadinayso waxaa ku jira hogaamiyaha guud ee Al-shabaab Axmed Diiriye oo Shabaab dhexdooda looga yaqaan Abu Cubayda, kaas oo madaxiisa la dul dhigay $250,000.
Dhanka kale, Golaha Wasiirada ayaa ka dooday xayiraada ay dowladda Kenya kusoo soo rogtay Xisaabaadka Shaqsiyaad ay ku jiraan dad Soomaaliyeed iyo Xawaaladaha qaar ee ay adeegsadaan Soomaalidu, waxana Golaha Wasiiradu ay sheegeen in dalka Kenya uu joogo Wasiirka Arrimaha Dibedda Soomaaliya C/salam Cumar Hadliye, kaas oo Kenya kala xaajoonaya arrimaha taagan.
Wiil uu dhalay C/raxmaan Faroole oo dilay hooyadiis
Puntland oo isha ku heysa maamulka Gobollada Dhexe